‘Tsy hitsahatra aho’: Lehilahy Kazakh mikatsaka ny rariny ho an’ny fianakaviany raikitra ao Xinjiang any Shina noho ny famoretana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2019 15:33 GMT
Ny ray aman-drenin'i Akikat Kaliolla Kaliolla Tursynuli sy Venera Mukatai. Sary nomen'i Akikat Kaliolla ary nahazoana alalana.
Taorian'izay dia reny avy tamin'ny namany sy ny olom-pantany tao amin'ny Kaominin'i Emin, XUAR, fa samy voatazona ao amin'ny “toby fiarenana ” an'ny Antoko Kaomonista ao amin'ny faritra ny reniny, ny rainy ary ny rahalahiny roa.
Nilaza ireo manampahefana Shinoa fa an-tsitrapo ny fandraisana anjaran'ny mponina ao amin'ny foibe, izay antsoin'ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena matetika hoe “toby fiarenana”.
Niafara tamin'ny famintinana samihafa ny famelabelarana nataon'ny manam-pahaizana avy ao amin'ny Firenena Mikambana tamin'ny taon-dasa. Nolazaina ary fa mihoatra ny iray tapitrisa ireo vitsy an'isa tsy vondrom-poko Han – indrindra fa Uyghurs, fa misy ihany koa Kazakhs, Kyrgyz ary Hui – no notazonina tao amin'ny foibe tsy araka ny sitrapon'izy ireo.
Naneho ny tatitra avy amin'ireo masoivohom-baovao iraisam-pirenena toy ny Reuters fa nohamafisina toy ny fonja ny tranobe, raha ny tatitra nataon'ny AFP kosa dia nanaporofo fa manam-pitaovana toy ny fonja izany. Nilaza ampahibemaso ny tahirin-kevitra fa nividy kibay marobe ho an'ny polisy, karavasy, gadra rojovy ary tsifitra lakrimozena ny tompon'andraikitra ao an-toerana izay manara-maso ny foibe toy izany, hoy ilay tatitra.
Niresaka momba ny fiarovana henjana ho an'ny rainy sy ho an'ny Kazakhs marobe izay nosamborina tsy ara-drariny tao amin'ny faritr'i Emin i Akikat tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny fampitam-baovao vahiny. Mahita izany ho antony iray nahatonga ny fianakaviany ho lasibatra izy.
Ny Angondrakitra ho an'ny Niharam-boina tao Xinjiang no angondrakitra lehibe indrindra amin'ny fiteny Anglisy mifandraika amin'ireo niharam-boina tamin'ny famoretana mitohy ao XUAR.
Zeorzia 16 ora izay